Tun Tun's Photo Diary: March 2015
at 3/30/2015 06:11:00 AM Links to this post No comments:
at 3/25/2015 07:35:00 PM Links to this post No comments:
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က သွားထားတဲ့ Langkawi ခရီးစဉ် အကြောင်းပို.စ်ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ. မရေးဖြစ်တာ အခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။ သွားထားတာ ကြာပြီဆိုတော့ ပို.စ်ရေးဖို. တော်တော်လေး ပြန်စဉ်းစားရမယ်။
at 3/13/2015 03:05:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Food, Langkawi, Malaysia, Thai Food
at 3/02/2015 06:30:00 PM Links to this post No comments: